Mujaahir Tanzanian Ah Oo Ka Soo Muuqday Q4aad Ee Boorri Mu’miniinta (DAAWO+AKHRISO) | Radioandalus24
Mu’asasada Al-Kataa’ib, garabka warbaahineed ee Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa baahisay qeybtii 4aad ee silsiladda Boorri Mu’miniinta oo ah muuqaallo taxane ah oo xambaarsan fariimo ku socda Muslimiinta bariga Africa.
Xalqadan waxaa lagu soo gudbinayaa kalimad muhiim ah oo uu jeedinayo walaal lagu magacaabo Xusseen Al-Muhaajir oo ka soo jeeda dalka Tanzania, kaas oo ka mid ahaa Muhaajiriintii timid Saaxaadka Jihaadka Soomaaliya, ka tababartay, ka dagaalamay dhulkeeda, ugu dambeyntiina ku shahiiday.
Xusseen wuxuu dhalinyarada Muslimiinta ee ku dhaqan wadamada bariga Africa ugu baaqayaa in ay u soo haajiraan Soomaaliya.
Hoos Ka Akhri Tarjamada Kalimadda Xusseen Oo Somali Ah
Hussain – Tanzania
Allaah subxaanahu watacaalaa wuxuu qur’aanka ku leeyahay:
Nabi Muxamed Salallaahu Caleyhi Wasalam, Isagana wuxuu yiri:
بلِّغوا عني ولو آية
Anaga, hadaan nahay Umadda Muslimka ah, waxaa nala amray in aan wax is xusuusino, wanaagana isfarno midba midka kale sababtoo ah ma jiro Nabi kale oo imaan doono Nabigeena ka dib.
Anaga, Hadaan nahay Muslimiin, waan tukanaa, waana gudanaa acmaasha kale ee cibaadada anagoo hadafkeenu yahay in aan ku helno Janno laakiin inkastoo dhamaan cibaadaadkan aan la imaano, hadana weli wuxuu Allaah nagu wargelinayaa in uu jiro ganacsi kale oo naga bad-baadin doona cadaab xanuunka badan. Aayadan waa balanqaad ka yimid Allaah oo ah in qofkasta oo u dagaalama diintiisa, kuna dagaalama naftiisa iyo maalkiisa, uu Allaah ka bad-baadin doono cadaabta Naarta.
Dhamaan walaalaheyga qaaliga ah ee ku nool Kenya, Tanzania iyo dhamaan wadamada deriska la ah Soomaaliya, Ogaada in Jihaad uu ka hanaqaaday halkan Soomaaliya ah. Horay waxaan Jihaad ka maqli jirnay Afghanistan, Filistiin iyo Shiishaan. Muslimiinta ku dhaqan bariga Afrikana wey ku adkeyd in ay aadaan furimaha dagaal ee wadamadaasi sababo ku aadan dhirirka safarka iyo safarka oo ah mid aan raqiis ahayn.
Laakiin hadda si kasta oo ay noqotaba wuxuu Allaah na siiyey fursad ah in Jihaad laga yigleelay Soomaaliya.Waxa kaliya ee lagaaga baahan yahay walaalkeyga Muslimka ah ee Kenya joogoow, waa un kaliya in aad ka soo gudubto xad-ka oo aad soo gasho dhulkan, Wallaahi baan ku dhaartaye Allaah wuxuu balan qaaday guul iyo in uu u gargaarayo adoomadiisa.
Ogow in Nabiga uu Xadiith ku sheegay in uu imaan doono waqti gaaladu ay isku soo uruursan doonto la dagaalanka Muslimiinta si la mid ah sida dadku isugu yimaadaan xeero raashiin ah oo kale. Saxaabada ayaa nabiga weydiiyey, Tani ma tira yarida Muslimiinta darteed baa keeneysa? Nabiga wuxuu yiri Maya, balse taasi badalkeed Muslimiintu xilligaas wey badan yihiin laakiin waxay yihiin sida daad-xoorta oo kale, ka dibna wuxuu u sii sharaxay in sababta asalka ah ee keentay arintaas in ay tahay Aduunyo Jaceel iyo geeri Naceeb.
Umadda Muslimka ah badankood maanta wa kuwo wax fahamsan Laakiin dhibaatada ku habsatay ayaa ah kaliya geeri naceyb iyo aduunyo Jaceyl balse ogaada Allaah wuxuu qur’aanka ku leeyahay:
Taasi waa balanqaadka Alle, Kuma ayaa ka run badan Allaah. Hadaba Hadii ay Muslimiintu u soo baxaan dagaalka wadada Alle, Waxaa hubaal ah in Allaah uu guul siinayo. Maanta dad badan waxaa wadnahooda buuxiyey cabsida iyo rucbiga ay ka qabaan Mareykanka, Waa Ayyo Mareykanka? America Allaah agtiisa waxay ka tahay wax iska liita oo aan micno lahayn. Allaahna wuxuu leeyahay Junuudda cirka iyo dhulka. Ogow Oxygen-ka ay Ameerikaanku ku neefsadaan waxaa iska leh Allaah. Haddii uu Allaah kala noqdo nicmadaas, ma waxaa jira cid awoodda in ay caawiso.
Allaah Wuxuu qur’aanku noogu sheegay:
American iyo NATO waxay ka dagaalamayeen Afghanistan in ka badan 10 sano Laakiin weli ma gaarin ujeedkooda Inkastooy bixinayaan cadad badan oo lacag ah, kuna daadgureynayaan ciidamo ka badan 100 kun oo askari, tanina waa balanqaadka Alle markii uu yiri: ka dib waa la adkaan doonaa, taasina waa gabagabada gaalkasta, ugu dambeyntiina waa laga adkaanayaa.
Waxaan hadaba walaalayaal idinkula talinayaa ogaada in wadada kaliya ee sharaf lagu gaaro in uu yahay Jihaad. Sidaas darteed waxaa dadka ku nool Kenya, Tanzania, Ethiopia, Sudan iyo dhamaan wadada deriska la ah Soomaaliya ee awooda in ay soo Haajiraan –yar iyo weyn- Waxaan ugu baaqayaa in ay hadda soo haajiraan. Dhamaanteen aan Hijro soo sameyno, isku imaano, gacmahana isqabsano markaas waan faafin karnaa Islaamka. Wassalaamu Caleykum Waraxmatullaahi Wabarakaatuh.
Updated: July 16, 2017 — 4:01 pm